RollerCoaster Tycoon Classic inorova iyo App Store | IPhone nhau
RollerCoaster Tycoon Classic inorova iyo App Store
Vakwegura vachanyatso kurangarira mutambo weAtari kubva kuma90s, mataive nawo gadzirisa paki yekuvaraidza. Mutambo uyo unonzi RollerCoaster Tycoon waive wakabudirira uye yayo yekutanga vhezheni pakupedzisira yazongomhara paApp Store. Mutambo uyu une mutengo muApp Store ye 5,99 euros, kwatinogona kuwedzera akasiyana ekuwedzera pamutengo we1,99 euros imwe neimwe uye pakati pedu yatinowana Wacky Worlds, Nguva Kufamba uye Bhokisi reMaturusi. MuRollerCoaster Vatambi veTycoon vachanakidzwa nekugadzira uye kuvaka ma roller coasters uye zvinokwezva, kushongedza mapaki, uye kugadzirisa vashandi nemari kuti pari yekutandarira ibatsire.
RollerCoaster Tycoon Classic Zvimiro
Iyo yekutanga RollerCoaster simulatorNakidzwa nekunakidzwa kwese kwese kwekutanga RollerCoaster Tycoon® uye RollerCoaster Tycoon® 2 mitambo, iine chishandiso chitsva chinobatanidza zvinhu zvakanakisa zvemazita maviri echinyakare.
Kuvakwa kwema roller roller: Gadzira zvinoshamisa roller roller! Kurumidza kuvaka yakagadzirira-yakagadzirwa coaster kana shandisa inonzwisisika chidimbu-ne-chidimbu maturusi ekugadzira kugadzira uye kugadzirisa ako ako kukwira.
Mugadziri wePaki: Chengetedza vashanyi vako vachifara nekuvaka zvinyararire kana zvine wacky kutasva, chikafu nezvokunwa matanga, kukwira kwemvura, uye kunyange kutakura kuti vafambe nepaki. Iwe unogona zvakare kugadzirisa paki nekuwedzera nzvimbo, kuvandudza nzvimbo, nekuisa nzira.
Paki manejimendiChengetedza kushambadzira uye mari yepaki yako kuti uwane purofiti uchikwezva vamwe vashanyi; ronga vashandi vako kuitira kuti paki ifambe mushe uye inotaridzika zvakanaka.
Mamiriro ezvinhu anonakidza: Vaka iyo yekupedzisira theme paki mune akateedzana enzvimbo dzakaomarara, kubva parunyararo rweForest Frontiers kusvika kune rakabatikana rekutengeserana reMegamundial Park.
Zviitiko zvePaki: Kufambira mberi kuburikidza makumi mapfumbamwe nemapfumbamwe epaki maseru kubva kuRollerCoaster Tycoon® uye RollerCoaster Tycoon® 95.
RollerCoaster Tycoon® Yakajeka6,99 €
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » IPhone mitambo » RollerCoaster Tycoon Classic inorova iyo App Store
Apple inotanga kutsiva iPhone 7 Plus nematambudziko kamera
Google inosimbiswa kuvhura 2 smartwatches ane Android Wear 2.0